नयाँ बजेटमा के के छ ? मुख्य बुँदाहरु – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ आर्थिक ∕ नयाँ बजेटमा के के छ ? मुख्य बुँदाहरु
नयाँ बजेटमा के के छ ? मुख्य बुँदाहरु
दीप संञ्चार जेठ १५, २०७८ गते १८:०५ मा प्रकाशित
काठमाडौं — सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
सरकारले स्टार्टअप कार्यक्रम घोषणा गर्दै यसरी गरिने व्यवसायलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने भएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न गरिने भएको छ । त्यसका लागि कामको परियोजना धितो राखेर कर्जा निकाल्न सकिने छ ।
परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुँजी कर्जा दिइने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बलिङका लागि विश्वका १० टप ब्रान्ड कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने भएको छ ।त्यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई सहुलियत कर्जा र जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
ट्याग : #budget
एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा र अर्थमन्त्री शर्माबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी…
शिक्षा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन